गर्लफ्रेन्ड जो हरेक महिना प्रेमीबाट लिन्छिन् १ करोड बढी स्यालरी! « Dainik Online
गर्लफ्रेन्ड जो हरेक महिना प्रेमीबाट लिन्छिन् १ करोड बढी स्यालरी!
प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार ५ : ००
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो संसारका धनी खेलाडी हुन्। खेल बाहेक रोनाल्डो व्यक्तिगत जीवनका कारण समेत बेलाबेला निकै चर्चामा आउने गरेका छन् ।
यो पटक उनी आफ्नी प्रेमीका जर्जिना रोड्रिगेजलाई लिएर फेरी चर्चामा छन्। एक रिपोर्टका अनुसार रोनाल्डोले आफ्नी प्रेमिकाको खर्चका लागि प्रत्येक महिना १ करोड बढी पैसा दिने गरेका छन्। रोनाल्डोले प्रेमिकालाई दिने पैसालाई बेलायती मिडियाले तलबको संज्ञा दिएका छन्।
इएल न्यासनलका अनुसार रोनाल्डोकी प्रेमिकाले प्रतिमहिना ८३००० पाउन्ड (करिब १ करोड ३१ लाख नेपाली) पैसा बच्चाको स्याहार सुसार र अन्य खर्चका लागि लिने गरेकी छिन्। केहि समय अगाडी रोनाल्डोले प्रेमिकालाई डेढ करोडको कार उपहार दिएका थिए। उनीहरु दुवै जना एकदम सानदार जिवन बिताउने गरेका छन्। त्यसको केहि झलक सामाजिक सञ्जालमा समेत देख्न सकिन्छ। जर्जिना र रोनाल्डो २०१७ देखि एकसाथ छन्।
रोनाल्डोकी प्रेमिका पेसाले मोडल हुन्। उनले केहि ब्रान्डको विज्ञापनमा अभिनय समेत गरिसकेकी छिन्। उनको सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ३६ मिलियन फलोअर्स छ। उनका फोटोमा लाखौको संख्यामा लाईक कमेन्टहरु आउने गरेको छ। उनीमाथी बनेको डकुमेन्ट्रिमा उनले जिन्दगीको धेरै पलहरु बारे कुरा गरेकी छिन्।
सानदार जिवन जिउछिन् जर्जिना
‘द मिरर’को रिपोर्ट अनुसार कुनै बेला स्टोरमा कामगरि सामान्य जिवन बिताउने जर्निना रोनाल्डोसँग जोडिएपछि सानदार जिवन बिताउन थालिकी हुन।
जार्जिना हाल ४८ करोडको सानदार घरमा बस्छिन् भने ५५ कारोडको कार चढ्छिन्। उनले मंहगा मंहगा गाडी फर्दै घुम्न जाने गरेकी छिन्।
उनको घरमा स्विमिङ पुल, जिम र फुटबल ग्राउन्ड समेत छ। रिपोर्टका अनुसार उनी हवाई यात्राको लागि व्यक्तिगत जहाज समेत प्रयोग गर्ने गरेकी छिन्। एजेन्सी
‘कबड्डी ४–द फाइनल म्याच’ शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शन हुँदै, होला त काजीको बिहे?